မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XIII	3
ရေအားမှလျှပ်စစ်စွမ်းအားရယူနိုင်ရန် တရုပ်က အာဖရိက နိုင်ငံ တွေကို
ဘယ်လိုကူညိ နေလဲ ဆိုတာကို တင်ပြ ပါ့မယ်၊
တချိန်က ဥရောပ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့ နဲ့ဂျပန်ဖက်ဆစ်တို့လို နယ်ချဲ့သတ်ဖြတ်ဖိနှိပ်နေတာ မျိုး မဟုတ်ပါ၊
အခြေခံက ကုန်သယ် လုပ် ပြီး နိုင်ငံချင်း ကုန် ဖလှယ်လိုတာပါ၊
လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး၊လူနေအိမ် အထပ်တိုက်တွေ၊ဆေးရုံတွေ၊
ဆိပ်ကမ်းမြို့တွေ၊အမြန်ရထားတွေ၊ရေကာတာတွေ စသဖြင့် ဝိုင်းဝန်း တည်ဆောက် ပေးတယ်၊ ၎င်းတို့အတွက် ငွေချေးစိုက်ထုတ် ရင်းနှီးပေးတယ်၊ခေတ်မှီ စိုက်ပျိုးရေး ပညာ အပါအဝင် ဆက်လက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ထိန်းသိမ်း
နိုင်ရန် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးတယ်၊ —————————–
bloomberg.com 2015-9-29 (နံမယ်ကျော် US စီးပွါးရေးသတင်းစာ)
ငါတို့ရဲ့စီးပွါးရေး အခြေခံအုတ်မြစ် (ရေအားလျှပ်စစ်) ကိုသူတို့က
လျှပ်စစ်စွမ်းအား မရှိရင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း မ ဖြစ် ထွန်းနိုင် ပါ “This gives usareal basis for our economy. Without power there is no development.“
Ebola ပိုးကိုကြောက်လို့ ထွက်ပြေး ကြတဲ့ အနောက် တိုင်း အဖွဲ့တွေလို
မဟုတ်ပါ၊ တရုပ်တို့ကဆက်နေပြီး ရေကာတာ ကို တနှစ်ဆောအောင်
အပြီးလုပ်ပေးလို့ တရုပ်ကငါတို့ရဲ့စီးပွါးကို ကယ်တင်လိုက်တယ်Guinea နိုင်ငံ
ရေကာတာ အကြီးအကဲ Fofana ကဆို
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံ ရေကာတာ အကြီးအကဲ နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြော မေးမြန်းခြင်း
အကြီးစား ရေကာတာ ဆိုးကျိုးပေးနိုင်သလောက်
အငယ်စား အလတ် စား ရေကာတာ တွေ ကလဲ ပေးနိုင်တာပါ၊ ဒိထက်ပင် ဆိုးကျိုးပေးနိုင်တယ်၊
ရေတွေ လေလွင့်တာ အငွေ့ပျံတာတို့ ပိုများလာ၊
အိန္ဒိယလဲ က ဒီပြသနာ ကို တိတိကျကျ ထောက်ပြ နိုင်
ကွပ်ကဲဘို့လွန်စွာမှ ခက်ခဲလာပြီး သာမန်(ထုတ်လုပ်မှု)
စံညွှန်းကိုတောင် မ မှီနိုင်ဘို့များတယ်၊ (ထွက်သင့်
သလောက် မ ထွက်ပါ)
သွယ်ရေး မျိုးစုံတို့မှာ အကြီးsစားရေကာတာ က သာလွန်တယ်ဆိုတာ
ကျနော်ကThree Gorges ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ဆဲနဲ့ဆောက်ပြီးလို့လည်ပတ်
စီးပွါးရေး၊ သဘာဝဝန်ကျင်၊ နဲ့ လူမှုရေး မူသုံးမျိုး သုံးတန် ကို မျှတစွာလက်ကိုင်ပြုလာ
ရေ ဆိုတဲ့ သယံဇာတတွေကို အကျိုးရှိစွာ စီမံကွပ်ကဲ ခဲ့တယ်၊
သို့သော် အခြားနိုင်ငံ နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ရေကာတာ တည်ဆောက်
ကူညီတဲ့အခါ ကျတော့ သဘာဝ ဝန်းကျင် ကို သိပ် အာရုံ
မ စူးစိုက် မ လွန်ကဲ စေချင်ပါ၊
တရုပ် အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ် လို့ဖြစ်စေ၊ဆောက်လုပ်ပေးလို့
ဖြစ်စေ ပါဝင် ကူညီ နေတဲ့ အာဖရိကတိုက်၂၂ နိုင်ငံက ရေကာတာ ဇယား
Ghana ကBui ရေကာတာ
SubSahara ဆဟာရ သဲကန္တရ အောက် ပိုင်း အာဖရိက တိုက် ဒေသကြီး သို့
လျှပ်စစ် စွမ်းအား ၃၀ % ထပ်တိုး လာအောင် တရုပ် ကုမ္ပဏီတွေက
ကြီးမားတဲ့ အခန်း ကနေ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေး တယ်လို့ IEA ကမ္ဘာ့ စွမ်းအင် အဖွဲ့ကဆို
အာဖရိကနိုင်ငံတွေက ဓာတ် အားရဘို့အရေး
တရုပ်ကြောင့် လူဦးရေ ၃၆ သန်း လျှပ်စစ်မီးအားရလာပြီး
၂၀၂၀ ကျရင် လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၂၀ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ရလာ
အကြီးပိုင်း (အပြာရောင် အစိတ်အပိုင်) က ရေအားမှလျှပ်စစ် စွမ်းအား ပါ
IEA အရ တရုပ်ရဲ့ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစားရိတ် က (သူများထက်)
ပိုပြီးသက်သာ တယ်၊ ချွင်းချက်၊ တရုပ်ပြည်မှာဆောက်တဲ့ရေကာတာ ထက်
တော့ ပိုကုန်ကျတယ် (ခရီးစရိတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ခတွေ ပါမှာ)၊
လျှပ်စစ်စွမ်းအား မ ရလို့ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၆၃၅ (မြန်မာ ရဲ့ ၁၁ဆကျော်)ရဲ့
ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အပြင်းအထန် ဟန့်တားချုပ်နှောင် ထားတယ်၊
စက်ရုံလုပ်ငန်း၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး အလုံစုံ တို့က ပုံမှန်ရမဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအား
ကို အမှီသဟဲ ပြုနေတယ်
Ethiopia ပြည်သူတဦးရဲ့ ဥဒါန်းကျူးရင့် ရင်ဖွင့်ခန်း
တရုပ်နိုင်ငံ ကို ကြိုဆို ဂုဏ်ပြု လိုက်တယ်၊
အာဖရိက တိုက်မှာ Ethiopia က အင်အားကြီးနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာပြီ၊
ရေပေါကြွယ်တဲ့ Ethiopia က လျှပ်စစ်စွမ်းအားပေါကြွယ် လာပြီး
( ရေနံပေါများတဲ့)Saudi Arabia လို မ ကြာခင် ချမ်းသာကြွယ်ဝ တော့မယ်၊
ဂျပန် ဂျာမဏီ တရုပ် အမေရိကန် တွေကEthiopia ကို လာပြီး စက်ရုံတွေ
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျနော် တို့မှာ အရေးကြီးဆုံး အရာ နှစ်ခု
ရှိလို့၊ ဈေးပေါတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအား နဲ့ သက်သာတဲ့ လုပ်အားခ
ကျနော်တို့ အားလုံး ကအလုပ်ရကြမှာ၊ တရုပ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး လာတဲ့
ဘယ်သူက ဒီလိုဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သလဲ?
Ethiopia က ရေကာတာကြီးတွေ မ လုပ် ရအောင် ကျနော် တို့ရဲ့
ရန်သူတွေက အ နှစ် ၆၀ လိုက်တား ခဲ့တာ……
Ehtiopia ကGilgel Gibe III ရေကာတာ ကို အောင်မြင် စွာ တည်ဆောက်
( မြစ်ဆုံ က ၆၀၀၀ မဂ္ဂဝတ် ထုတ်နိုင်တယ် ဆိုတော့ သူတို့ ထက် ၃ ဆ ပိုစွမ်း)
စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ Ethiopia အစိုးရ နဲ့ အကင်းပါးတဲ့ Ethiopia လူထု က
တရုပ်အကူအညီနဲ့ Zambia က ရေကာတာ ကို စ တင် တည်ဆောက်
Zambia launches construction of China-aided hydro-power project NOVEMBER 30, 2015 FROM XINHUA CHINA GO ABROAD Zambia launched on Nov. 28th the construction ofaChina-aided major hydro-power project, which will goalong way in boosting the country’s electricity generation capacity. The launch came after the signing ofamemorandum of understanding by the two governments for the commencement works on the development of the 750 megawatts Kafue Gorge Lower Hydro-power project last month.
Uganda က Isimba နဲ့ Karumba ရေကာတာ ၂ ခု စလုံး ကို တရုပ် ကန်ဟရိုက်တာ တွေရကြတယ်
ကျနော်တို့က အတိုးနှုန်းသက်သာ တဲ့ ချေးငွေ တွေကိုလိုက်ရှာနေတာ၊
တရုပ်နိုင်ငံက အဲဒီ ပိုက်ဆံရှိတာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တရုတ်ကတော့ အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်ပုံ။ ဆည်မြောင်းက စီမံကိန်းဆွဲထားတဲ့ ပုံရှိသေးတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဆောက်ရင် ဒေါ်လာ ၈ဘီလျံ ကုန်မယ်ဆိုလား။ ၁၀ နှစ်ကြာမယ်တဲ့။ ငလျင်ဒဏ်ခံပေါ့။ အဲဒါက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ခက်တာကိုပဲ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူများအားကိုးရင် ကိုယ်ခါးကျိုးတာ များတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲ ဆောက်နိုင်ချင်တာ။
mgsai says: Yes Strongly agree.
ကိုယ့်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုရင် လုပ်ကိုလုပ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် တိကျတဲ့ဥပဒေနဲ့ ပြန်လည်ထိန်းကျောင်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။